पाँच गोली लागेको अवस्थामा भेटिए तुलसीपुरका पौडेल : RajdhaniDaily.com
Home प्रदेश प्रदेश ५ पाँच गोली लागेको अवस्थामा भेटिए तुलसीपुरका पौडेल
पाँच गोली लागेको अवस्थामा भेटिए तुलसीपुरका पौडेल
तुलसीपुर । पाँच गोली लागेको अवस्थामा तुलसीपुर एक व्यक्ति फेला परेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ बराहाखुटी निवासी ४५ बर्षीय खुशलराम पौडेल गोली लागेर गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा लमही नगरपालिका वडा नं. ९ च्याउ खोलामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
पौडेलको पुठामा ३ वटा र दाहिने खुट्टाको तिघ्रामा थप २ वटा गोलि लागेको अवस्थामा गए राति साढे ९ बजे फेला परेका थिए । प्रहरीले गोली लागेको जानकारी नेपालगञ्ज नरसिंह होमबाट पाएको थियो । घाइतेको बाँकेको नेपालगञ्ज नरसिंह होममा उपचारपछि थप उपचारकालागि भारतको लखनौ लगिएको छ ।
‘घाइते हुनेवित्तीकै छोरालाई फोन गरेछन् । छोराको फोन नउठेपछि गाउँलेलाई फोन गरेर गाउँको सहयोगमा नेपालगंज उपचारका लागि लगियो,’ डिएसपी सिंहले भने–‘ त्यहाँ पुग्दा घाइते बोल्ननसक्ने अवस्थामा भएकाले जानकारी पाउन सकिएन । उतैबाट हामीलाई जानकारी आएकाले अनुसन्धानमा गएराति देखिनै खटेका छौ । वास्तविकता अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । ’
प्रहरीले शिकार खेल्न गएको बेला गोली लागेको हुनसक्ने अड्कल काटेको छ । अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी, तुलसीपुर र अमिलिया प्रहरीको टोली घटना स्थलमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका व्यवसायीबीच अहिले चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ । गत २८ र २९ चैतमा हुनुपर्ने निर्वाचन कोरोना भाइरस महामारीका...
भोजपुरमा बोलेरो दुर्घटना, चालकको निधन
भोजपुर । भोजपुर नगरपालिका– ५ काउलेमा बोलेरोले किच्दा चालकको ज्यान गएको छ । आज विहान साढे ६ बजे मे १ ज २९८८ नम्बरको बोलेरोले...
काठमाडौं । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको...
समाजवादको सारथी बन्न सहकारीलाई मन्त्री अर्यालको आग्रह
Exclusive Rajdhani Daily - December 18, 2019 0
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरी समाजबादको सारथी बन्‍न आग्रह गरेकी...
एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बन्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको लागि एमालेबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । उनी उम्मेदवारी दिनका लागि शुक्रबार मकवानपुरबाट हिँडिसकेको जनाइएको...
Editor-Picks Dhruba Lamsal - November 19, 2020 0
फत्तेमानको स्मृतिमा फत्तेमान स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना
कला Kumar Raut - September 11, 2020 0
काठमाडौं । दिवंगत गायक फत्तेमान राजभण्डारीको योगदानको चर्चा गर्दै काठमाडौंमा उनको पुण्यतिथि मनाइएको छ । करिब ६ दशक लामो नेपाली संगीत क्षेत्रमा उनको योगदानको...
राजनीति Dhruba Lamsal - August 9, 2020 0
खेल एजेन्सी - June 22, 2021 0
बिचार Kumar Raut - October 19, 2020 0
epaper राजधानी समाचारदाता - June 10, 2021 0